Nhau - Iyo yekugadzira nzira yeFIBC mudziyo bhegi yemukati yekuchenesa muchina
Iyo yekushandisa modhi ndeyeye munda wemagetsi michina, kunyanya kune yemukati yekuchenesa muchina, kunyanya kune iyo FIBC mudziyo bhegi yemukati yekuchenesa muchina.
Iyo yekushandisa modhi inozivikanwa mune iyoyo: iyo inovhuvhuta chishandiso fan, uye fan yacho yakagadzikwa pachigadziko kuburikidza neiyo fan base.
Muchina wekuchenesa wemukati wemabhegi ane midziyo unoonekwa mune kuti: iro bhokisi hombe rinopihwa neplate yepamusoro yekuvhara, iro bhokisi hombe muviri unopihwa mugero wekusviba kunowira, pasi pechiteshi kunopihwa ndiro isina kuvhuvhuta yemhepo. iyo inofarira kuiswa, uye chiteshi chinoumbwa pakati pemhepo chinokatyamadza, uye sefa firita yekusefa zvakasara uye marara zvakarongwa pazasi penzvimbo, uye nhovo yemhepo inoshandiswa kutungamira mhepo uye tsvina kune firita sikirini Iyo chiteshi inopfuura nepahombodo yepamusoro uye inotambanuka ichibva mubhokisi guru remuviri, uye kumagumo ekumusoro kweiyo chiteshi inopihwa bhureti-rakaumbwa semubhadharo wekutungamira kudonha kwetsvina. Iyo fan inosanganisirwa neyepazasi chiteshi chepombi yemhepo iyo yakarongedzwa axial mugero kuburikidza neyemukati mhepo pombi iyo yakarongedzwa mubhokisi rakakura muviri. Chiteshi chepamusoro chepombi yemhepo ruoko rwekunze rwunotambanuka kubva mubucket rekutungamira, uye iyo yekumusoro yekupedzisira yeiyo huru bhokisi muviri unopihwa neyakaumbwa-wakaumbwa segireti bhaketi Chikamu chepazasi chakabatana nepombi yekubuditsa pombi yakarongedzwa pasi pehwaro.